I-Alibre, eyona ilungileyo yoyilo loomatshini be-3D-iGeofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/U-Alibre, eyona nto ibhetele yokuyila i-3D
I-Alibre ligama lenkampani, egama layo linemvelaphi kwigama lesiLatini elithi Liber, apho inkululeko, inkululeko, inkululeko ivela khona; Ngamafutshane imvakalelo yenkululeko. Kwaye kukuba injongo yale nkampani isekwe ekunikezeleni ngemveliso ekumgangatho ophezulu ngexabiso elimangalisa kakhulu.
Imbali ibonisa ukuba ixabiso leprojekthi ye-3D yoyilo ifikeleleke yonke imihla:
Kwiminyaka ye-70 ComputerVision unike izisombululo ezazisondele kwizigidi zeedola, Catia kwi-80 wawudlulisela kwi-$ 100,000 ngelixa Pro / E wuthatha kwi-20,000 ye-$ ekupheleni kwe-80 kwaye ekugqibeleni kwi-90 Ulungelelaniso wayekwazi ukuhlawula i-$ 5,000, eyona xabiso, ngoko ke angathengisa iprogram yezobugcisa ngokuyila.
Ukususela kubadali be-PC-Draw, yokuqala ye-PC yokudweba isofthiwe, Alibre inikeza izisombululo ngaphantsi kwe-1,000 150 ngokuxhomekeke; Ilayisenisi inokufikelela kwi-US $ XNUMX okanye ngaphantsi. Le yinto ekuthiwa yinkululeko.
Kodwa ixabiso elinjeya liza kubonakala lingahambelani, kwaye linokujongelwa phantsi. Njengoko ndibonile kwizisombululo ezinje GIS asibonise e IntelliCAD, emva kokuba umfundi endixelele ngo-Alibre, kwafuneka ndicinga kwakhona ukuba kutheni iinqununu ezi zingaphantsi kweli nqanaba zingathandeki ukuba amandla abo akanakunqwenela ukukhwele isofthiwe esaziwayo.
Nguwuphi u-Alibre onika
Ubutyebi be-Alibre bukunika isisombululo, ngokukodwa kwi-design ye-engineering (CAM)Ukusetyenziswa Kwekhompyutha), kunye ne-3D imodeli, iindibano, imidwebo ye-2D, uhlalutyo lokuxhatshazwa kwezinto ezibonakalayo.
3D uyilo. Ukusebenza kokuphathwa kwezinto eziqinileyo kulula kakhulu, ukujikeleza kwenxalenye kwisitshixo esilula kunye nokutsala simahla kwimouse. Ngokusekwe kwiimpawu (parameterization), iziqwenga akufuneki zakhiwe kwasekuqaleni, khetha ngokulula kwilayibrari, chaza ububanzi, ukuphakama, ubukhulu, izinto, imiphetho, yiyo ke leyo.
Ukongezelela banokuhlanganiswa ukuze benze izinto ndawonye, ​​basebenze kwisityalo, bevela ngaphantsi, bevela phezulu, banqunywe ...
Amacwecwe ensimbi Oku kunomdla kakhulu, unokusebenza kuyilo lweenxalenye zesinyithi, kunye neenqobo ezisemiselweyo. Ukuvula iziqwenga eziqokelelwe kwiphepha elinye elinemiphetho esongiweyo kufana nokudlala i-origami. Kodwa ngaphaya koko, ukumodareyitha kweendawo ezintsonkothileyo ekulindeleke ukuba zihlanganiswe kamva, kudluliselwe kuhlalutyo nakwinkcazo enomdla kakhulu.
Thabatha kwaye ushiye. Ukuphathwa ngokuthe ngqo kwezinto ze-3D kuyasebenza kakhulu; indawo ofuna ukuyolula ifuna kuphela ukutsala imouse. Kuyenzeka ukuba ungenise ngaphandle kwemfuno yolwandiso, idatha evela kwiifomathi:
I-SolidWorks: 1999 ku-2009 (* .sldprt, * .sldasm)
ISIGABA 203 / 214
Kwakhona kunye nekhonkco yedata ungangenisa idatha yendalo evela kwiinkqubo ezidumileyo:
I-AutoDesk Inventor: v10 ku-2009 (* .ipt, * .iam)
Pro / E: 2000 kuMlilo Womlilo 4 (* .prt, * .xpr, *asm, * .xas)
I-SolidEdge: v10 ku-v20 (* .par, * .psm, * .asm)
Catia: v5 ukusuka ku-R10 ukuya ku-R18 (* .CATPart, * .pCATProduct)
I-Parasolid: v18 (* .x_t, * .x_b, * .xmt_txt, * .xmt_bin)
Kwaye kunye neendlela ezitsha zokudlala ezisebenzayo:
I-SolidWorks: 2004 (* .sldprt, * .aldasm)
I-Parasolid: v9 (* .x_t, * .x_b, * .xmt_txt, * .xmt_bin)
2D. Xa usebenza kunye nezinto ze-3D, inkqubo ivelisa imidwebo kwi-2D eya kusetyenziselwa ukucwangciswa kwangempela kweziqwenga.
Ukujonga ubukhulu bemizuzu, ukujonga kwe-isometric kunye nokucutshungulwa kuhlaziywa Kuluhlu ukuba iiparameters zeqwenga ziguqulwa.
Umphathi wakho wencwadi unokulawula ukunyathela kwinqanaba lomqulu ngamnye, ekugqibeleni kuya kubakho imemori yokubala nokuyila apho umxhasi uya kuxhaswa khona.
Uhlalutyo nokunyakaza. Nje ukuba isiqwenga senziwe, isimilo sayo sinokuhlalutywa kubathengisi abaya kuthi basebenze kuyo besebenzisa indlela yento egqityiweyo eneigrafu ezibonisa imibala. Ukongeza, iividiyo zinokuveliswa ngendlela oza kuziphatha ngayo umatshini ngokwendibano yawo, nayo yonke into eneempawu zayo ezimiselweyo, ukusuka kwinto engu-K entwasahlobo ukuya kukuqhekeka kwesiqwenga esiphantsi koxinzelelo.
Ngale ndlela kunokwenzeka ukuba ube nokucaca kweyona ndawo sikuyo ngqo, isantya, eyona ndawo ibuthathaka kunye nengcinga elula yokubona iprototype ngaphambi kokuyivelisa. Ukongeza, uyilo lunokulungiswa kububanzi obuchanekileyo buhlala kwisiqwenga ngokokubonisa kohlalutyo lwamandla. Zonke zizenzekelayo; tshintsha ububanzi bewasha, uhlaziye izicwangciso, uhlaziye ukubala kwaye uvavanye ukusebenza kwayo.
Ukunikezela Kuyothusa oku, andazi ukuba ndingakuphepha njani ukusebenzisa ubutyebi obuninzi ngesisombululo sokubonelela esibonelelwa nguAlibre. Kwaye kukuba ubomi bokuyilwa koomatshini kukuba, njengoko bathambekele ekubeni ziingceba zesinyithi, incasa yayo ikukuqaqamba nokufana kwenyani.
Kwakhona ukwakhiwa kwemodeli ye-lathe yezoshishino kuyinzuzo.
Inesithembiso sokumodareyitha sokuba ngokokuma kwephepha ukusuka kuMgangatho oyi-US $ 1,000, i-Professional US $ 2,000 kunye neNgcali kufutshane ne-US $ 4,000. Nangona kwintengiso esandula kuvela Sysengtech, umhambisi eMexico, iNgcali ikwi-US $ 499 kunye neNgcali kwi-US $ 999, kunye nenketho yokuba xa uthenga ngoku uya kuba nohlobo luka-2011 simahla.
Ngokuqinisekileyo, ixabiso layo alihambelani nayo yonke into eyenzayo. Ezinye zezona zinto zibalaseleyo ndizibonileyo zesoftware yobunjineli boomatshini.